अल्टिमेट क्रिकेटमा सिटिजन्सको सानदार सुरुवात | Hamro Khelkud
अल्टिमेट क्रिकेटमा सिटिजन्सको सानदार सुरुवात
शुक्रबार, भदौ ३, २०७३
एम.एण्ड.एम. रेमिट अल्टिमेट इन्डोर क्रिकेट कप कर्पोरेट २०१६ अन्तर्गत पहिलो दिनको खेलमा सिटिजन्स बैंकले दुइ जित हासिल गर्दै राम्रो सुरुवात गरेको छ।
सिटिजन्सले पहिलो खेलमा नबिल बैंक (५४) विरुद्ध १६३ रन्को विशाल योगफल तयार पार्दै १०९ रनको अन्तरले खेल जितेको थियो। सिटिजन्सले आफ्नो दोश्रो खेलमा एन.एस.जे.एफलाइ ८६ रनले हराउदै अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो परेको हो ।
दिनको पहिलो खेलमा रमेश थापाले तिन विकेट लिएपछि एन.आई.सी एसिया बैंक(८३)ले श्रीनगर एग्रो फर्म(२४)लाइ ५९ रनले हरायो भने दोश्रो खेलमा जेड.टि.इ.(१०८)ले युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्स(१०३)क विरुद्ध तिन रन्को झिनो जित हात पार्यो। सानिमा हाइड्रो(७१)ले नबिल बैंक(१०८)संग ३७रन्को हार व्येहोर्यो। नबिलका लागि अभिषेक पौडेलले २९ रन बनाउनुका साथै २ विकेट लिए।
बिभब जोशीको २२ रन र ५ विकेटको मद्दतले सेन्चुरी बैंकले अन्नपूर्ण पोष्ट माथि १७७रनको विशाल जित हात पार्यो। सेन्चुरीले दिएको १८६ रनको लक्ष्य पछ्याएको अन्नपूर्णले जम्मा ८ रन जोड्न सक्यो। अन्नपुर्ण खेलको अधिकांश समय नेगेटिभ रन लिएर बसेको थियो।
दिनको अन्तिम खेलमा मेगा बैंक(१२४)ले एम.एण्ड.एम रेमिट (७३)लाइ ५२ रनले हरायो। विजेता टोलीका आसिश श्रेष्ठ (२४ रन,२ विकेट) म्यान अफ द म्याच घोषित भए।